लकडाउनले फूलसँगै भाँचिदियो कृषकको मन – कृषक र प्रविधि
‘फूल बिक्री हुने सिजन यही थियो, लकडाउनले रोकियो। ३५ लाख लगानीमा गरेको फूलखेतीबाट आएको आम्दानीबाट मजदुरलाई ज्याला दिने भनेको खै यस्तो भइदियो,’ कोरोना कहरले फूल व्यवसायमा थलिएका हरिशहरण गिरीको वेदना हो यो।
काठमाडौंको रामकोटस्थित ज्ञानेश्वर फ्लोरिस्टमा दुःख बिसाउँदै गर्दा नर्सरीबाट फुलेका फूल पन्छाइरहेका थिए हरिशरण।
दाजु उद्धवराज गिरीसँगको साँझेदारीमा गरेको फूलखेतीको सत्यनास हेर्दा जो कोही बिरक्तिन सक्छ, तर के गर्ने विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीसँग कसको के लाग्दो रहेछ र! यसले फूल मात्र होइन कृषकको मन पनि भाँचिदिएको छ।
‘के गर्ने काटेर थुपार्छौं, गाउँलेलाई मन पर्‍यो र घरमा सजाउन मन लाग्यो भने लग्नुहुन्छ, नत्र यसरी नै बाख्रा, भैँसीले खाइरहेका छन्,’ व्यवसायबाट नाफा आर्जन गरेर थैली भर्ने बेला हरिशरणको पीडा अर्कै छ, ‘अब त गाई भैँसीलाई पनि फूलले अमन भइसक्यो होला!’
१२ जना मजदुर राखेर फूलखेतीमा लागेका गिरी दाजुभाइ सिजनमा दिनको ३५-४० हजार आम्दानी गर्दथे। तर, यो वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमण त्रास र लकडाउनको अवस्थाले ती दिन सपना जस्तो भइदिए।
३५ रोपनी बढी जमिन लिजमा लिएर फूलखेती गरेका हरिशरण पूरै घाटा बेहोेरिरहेका छन्। निराश छन्, अब के गर्ने? अवस्था अन्योल छ।
‘सोच्दैछौं अब के गर्ने कुनै उपाय छैन,’ देशमा सरकार भएको अनभूति गर्न चाहन्छन् उनी, ‘हामी जस्ता किसानलाई सरकारले उत्थानका लागि कुनै पहल गरेन भने ७५ प्रतिशत फूल व्यवसायी पलायन हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ।’
हरिशरणको फूलखेतीको अवस्था अनि यत्रतत्र खेर फालिएको फूलको बेहाल त एउटा उदाहरण मात्र हो, यहाँ देशभर कैयौं कृषक यस्तै पीडामा छन्। आमनागरिकको स्वास्थ्यको चिन्ता गर्दै लकडाउन गर्ने सरकार, कृषकका वेदनाप्रति पनि उतिकै जिम्मेवार छ, चिन्तित छ भन्ने अनुभूत गर्न चाहन्छन् कृषक।
आलुको नालीबेली : कहाँबाट सुरुभयो, कसरी विश्वभरी फैलियो ?